> Resource> Video> Olee otú iji tọghata DV ka MOV
DV, aka Digital Video, na-ezo aka video data dere site dijitalụ ese foto. Ọ na-mepụtara njikota aka site Sony, Panasonic, JVC, Sharp, Toshiba, Canon, na ọtụtụ maara nke ọma n'ụlọ ngwa Rafa. Mbubata DV ka iMovie maka edezi ma ọ bụ bulite ha ka ha YouTube, Facebook, Vimeo maka nkekọrịta, gị mkpa iji tọghata ha ka ha MOV format mbụ.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị aghọta ihe ọ bụla ngbanwe na nyopụta technology, na-achọghị na-aga na anya, a ọkachamara na mfe iji video Ntụgharị bụ oké enyemaka. Ebe a, Wondershare Video Ntụgharị maka Mac (Video Ntụgharị maka Windows) ukwuu tụrụ aro. Ya ozugbo awade QuickTime MOV format na-arụ n'ụzọ zuru okè ma ọ sụgharịa nta size karịa mbụ faịlụ na lossless mma. Ka ọ dịgodị, na ya embeded edezi atụmatụ, ị nwere ike na-emetụ gị videos ọsọ ọsọ na mfe. Ugbu a, ka na-eje ije site na zuru ezu usoro na Mac version, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata DV ka MOV na Windows usoro, biko rụtụ aka na ntuziaka Onye ọrụ n'ime Windows.
Free download ikpe version nke DV ka MOV Video Ntụgharị:
1 Ibu Ibu DV videos ka DV ka MOV video Ntụgharị
Nyefee gị vidiyo na kọmputa gị site na eriri USB ma ọ Firewire. Mgbe ahụ Dọrọ & dobe DV faịlụ ka usoro ihe omume. Ma ọ bụ gaa na "File" menu, họrọ "Tinye Media Files" aka ịchọta ndị AVI faịlụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ogbe conversionn, i nwere ike tinye ihe karịrị otu faịlụ.
Lee usoro ihe omume window n'okpuru, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka jikota ọtụtụ obere vidiyo n'ime otu nnukwu faịlụ, dị nnọọ lelee "jikota All Video" nhọrọ.
2 Set MOV dị ka mmepụta format
Ugbu a, ị na-abịa format ndọpụta ndepụta, họrọ DV si "Video" dị ka mmepụta usoro. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na afọ ojuju na nke ugbu a video ntọala, i nwere ike ịgbanwe ha site na ịpị gia "Isetịpụ" akara ngosi.
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu converted faịlụ na Apple na ngwaọrụ dị iPod aka, iPad, iPhone, wdg, ị nwere ike nanị ịhọrọ presets si "Devices" Atiya, ha na-emekarị na-egwu perferctly na ha.
Tupu video akakabarede, ị nwere ike:
Hichapụ na-achọghị akụkụ site trimming video faịlụ.
Tufuo nke nwa ala site cropping.
Hazie video site na-agbanwe video mmetụta.
Dị nnọọ pịa "Dezie" oyiyi n'akuku video aha ka ịnweta edit window.
3 Malite DV ka MOV akakabarede
Mgbe niile ukpụhọde afọ ju, ugbu a, ị ga-abịa ikpeazụ nzọụkwụ. Pịa "tọghata" button ka Video Ntụgharị maka Mac-eme ndị ọzọ maka gị. Dị nnọọ a abụọ akakabarede na-eme.
Ihe bụ ihe ọzọ:
Wondershare Video Ntụgharị maka Mac bụ ihe siri ike video Ntụgharị na-akwado ọkọlọtọ video formats dị ka MP4, M4V, WMV, mpg, MPEG, MOV, TS, Flv, 3GP wdg na HD video dị ka AVCHD (MTS / M2TS), AVCHD Lite, MOD / Tod, HD WMV, HD TS, HD mpg wdg Ọ nwekwara ike wepụ audios si videos na tọghata ha n'ime MP3, AAC, AC3 formats.
Free download n'okpuru DV ka MOV Ntụgharị:
Biko ndị nkuzi ebe a.
Olee otú iji tọghata XviD ka QuickTime MOV (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata MKV ka QuickTime MOV (Yosemite gụnyere)
Top 10 kasị mma Video Capture Software 2015 n'ihi na Win / Mac
Olee otú Tinye Sound mmetụta ka Video